Translate Telugu to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Telugu to Myanmar (Burmese), Telugu to Myanmar (Burmese) translations, Telugu to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
హలో, ఎలా ఉన్నావు မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
ఎవరైనా ఉందా? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
నేను నిజంగా ఎంతో ప్రేమించాను ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
ఈ హాంబర్గర్ ధర ఎంత? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
నన్ను ఒక టాక్సీ అని పిలవచ్చా? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
నన్ను క్షమించండి ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး
నేను ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
నా విమానం ఆలస్యమైంది အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
నేను వ్యాపారం కోసం ఇక్కడ ఉన్నాను ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
నమస్తే నా పేరు မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
క్షమించండి, నేను వివాహం చేస్తున్నాను ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
నేను మిమ్మల్ని అడగాలనుకుంటున్నాను ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
మీరు నన్ను విమానాశ్రయానికి తీసుకెళ్లగలరా? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
ప్రస్తుతం సమయం ఏమిటి, దయచేసి? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
సమీప పోలీసు స్టేషన్ ఎక్కడ ఉంది? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
నేను మీ ఫోన్ ఛార్జర్ను ఋణం పొందవచ్చా? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
మీరు నాకు సహాయం చేయగలరా? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
నాకు పానీయం ఇవ్వండి, దయచేసి? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
నేను గ్లూటెన్ కు అలెర్జీ ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
డాక్టర్కు కాల్ చేయండి ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
డాక్టర్ ఉందా? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
నాకు కాల్ ఉందా? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
మీ యజమానిని దయచేసి కాల్ చేయండి. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
ఈ స్థలం చాలా బాగుంది ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
దయచేసి హోటల్ కి తీసుకెళ్ళండి ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
నా గది సంఖ్య ఏమిటి? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?